ARRIMAHA BULSHADA – Page 2 – Warfaafiye:
Sawirro: Paris Hiltin oo faraanti jooga $2 milyan ugu dhex dhumay kalaab
Ali Mohyadin Mar 28, 2018 0
Ninka adduunka ugu dheer iyo naagta ugu gaaban oo Qaahira ku kulmay:…
La-Yaab: 50 Cent oo hilmaamay $8 milyan oo macaash uu helay: Video
Daawo: Filim laga sameeyay xasuuq Al-Shabaab ka geysatay Mandheere oo…
MUQDISHO: Hooyo cunugii ay dhashay ku riday musqul oo laga badbaadiyay: Video
Ali Mohyadin Jan 13, 2018 0
Dhacdo aad looga naxo ayaa ka dhacday degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir, kadib markii hooyo xoogsato ah ay ku dhex umushay musqusha dhexdeeda, kadibna ay ilmihii ay dhashay ku riday godka saxarada. Hooyadaan shaqaale ka aheyd guri ku…
Maxamed Bin Salman ma jebin doonaa heshiiska 250; Sano jirka ah ee Wahaabiyada iyo boqortooyada…
Editor Super Jan 8, 2018 0
Boqortooyada Sucuudi Carabiya waxaa ay hadda ku jirtaa isbeddel dar dark u socda oo Siyaasadda iyo Bulshada ah ah,waxaana boqortooyadda hadda saran tahay waddada qunyarsocodnimada,waxaana uu dhaxal sugaha doonayaa in uu dunida la hortago…
Nin Britain ah Oo lacagtii Ugu badneed Ka sameeyay YouTubeka Sanadkii 2017?
DanTDM ayaa loo magacaabay ninka dhaqaalaha ugu badan ka sameeyay YouTube sannadkii 2017kii, isaga oo helay 12.3 milyan oo gini, sida ay ku warrantay jariidadda Forbes. Ninkan reer Britain ee 26 jirka ah oo ka soo jeeda deegaanka Aldershot…
Video: Haweeney kasoo jeeda Ruushka oo noqotay qofka ugu lugaha dheer dunida
Ali Mohyadin Jan 5, 2018 0
Ekaterina Lisina ayaa noqotay haweeneyda dunida ugu lugaha dheer inta la og yahay dumarka adduunka ku nool, sida lagu xaqiijiyay buugga mucjisooyinka iyo la-yaabka lagu diiwaan geliyo ee Guinness World Records. Haweeneydaan oo dadka…
Heesta ugu shidan sanadka cusub ee baraha bulshada ku faaftay: Video
Ali Mohyadin Jan 2, 2018 0
Fannaanka ku caan baxay heesaha shiribka iyo dhaqanka ayaa sanadka cusubow ee 2018-ka kusoo shir tegay hees cusub oo shirib ah, taasoo ku faaftay baraha bulshada oo aad looga hadal haayo. Xuseen Nuuriyoow oo looga bartay heesaha shiribka…